Emerson Palmieri oo ah sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Talyaaniga Emerson Palmieri oo ah sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; "Emer". Our Emerson Palmieri Childhood Story Sheeko iyo Raadin Jir-Dhaafid Xaqiiqooyin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la-arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo ka baxsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay qaabkiisa cayaaraha, laakiin qaar ka mid ah waxay tixgelinayaan Emerson Palmieri's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Emerson Palmieri Hooyo Hore Dabiiciga ah Xogta Warka Xadida -Nolosha Hore
Emerson Palmieri dos Santos, oo loo yaqaano Emerson Palmieri ama Emerson wuxuu ku dhashay magaalada 3 ee August 1994 ee Santos, São Paulo, Brazil. Waxa uu ku dhashay hooyadiis Talyaaniga, Eliana Palmieri iyo aabaha reer Brazil, Reginaldo Alves dos Santos.
Emerson wuxuu leeyahay asalkiisa Talyaaniga ee hooyadiis, waxaana uu ahaa muwaadin talyaani tan iyo bishii Maarso 2017. Waxa uu ku koray walaalkiis ka weyn, Giovanni, kaasoo sidoo kale ah ciyaaryahan kubada cagta ka ciyaara oo kale. Emerson wuxuu jecel yahay kubada cagta Ingariiska tan iyo markii uu ahaa 15 sano jir.
Waxa uu kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay Santos isagoo da 'yar oo 16 ah ka dib markii uu ku soo biiray nidaamka dhalinyarada, 18 wuxuu udub dhexaad u ahaa kooxdii ugu horeysay, waxaana u mahadceliyay isaga oo sii kordhaya heerka ugu sareeya ee kubada cagta. Iskuday ayaa bilaabay isaga oo u eg sida xayawaan tan iyo markii uu ku guuleystay 2013 Copa Sao Paulo de Futebol Junior ee kooxda Santos U20. Waxay ahayd Palermo scouts oo ugu dambeyntii u soo safartay Europe. Doorashadii uu u qabtay kooxda Talyaaniga ayaa u mahadceliyey hooyadiis ka timid dalka. Emerson wuxuu fursad u helay inuu ku soo dhawaado qoyskiisa.
Kooxda Talyaaniga Palermo, oo si amaah ah ugu qaadatay 2014 / 15 xilli ciyaareedkii oo ay ku iibsatay. Nasiib darro, fursado uu ku dareemayo inuu yaraa iyo inta u dhaxeysa ka dib iyo ka dib markii uu sagaal kulan u muuqday kooxda ma uusan tixgelineynin heshiiska ay heshiiska u cusbooneysiiyaan.
Dhibaatada Palermo ayaa ah faa'iidada Roma ka dib markii ay ku qaadatay 21-jir-ka xilli ciyaareedkii 2015 / 16. Waxa uu xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ku qaatay Stadio Olimpico isagoo u fahmay Lucas Digne, lakiin waxa uu muujiyay ballanqaad ku filan oo uu ku sii joogi lahaa heshiiskiisa amaahda xilli ciyaareed kale. Tani waxay ahayd markii Antonio Conte Chelsea ayaa timid. Inta kale, sida ay yiraahdeen, haatan waa taariikh.
Emerson Palmieri Hooyo Hore Dabiiciga ah Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
Dhamaan way fududahay inaad jacayl ku dhacdo oo aad ku soo jiidato duufaanta nolosha ee qorshaha noloshiisa 'wadajir weligiis'. Tani waa kiiska Emerson Palmieri oo la joogay caruurnimadiisii ​​carruurnimada, Isadora Nascimento tan iyo labadaba da'yar.
Emerson ayaa la kulmay saaxiibkiisii ​​hore ee Isadora Nascimento ee Brazil, waxaana labadoodaba ay wada joogeen ilaa iyo haatan. Taageerayaasha Kubada Cagta ayaa si sahlan u ogaanaya in ay soo aruuriyaan Latina, oo qirtay inay si aad ah u ciyaarto daawashada Emerson.
Waxay hore u sheegtay: "Marka aan aado ciyaaraha, aad iyo aad ayaan u xooganahay, waan waalanahay, dhamaanba mahadnaqa nolosheyda. Mar walba waan jeclahay kubada cagta, laakiin ma ahan wax aad u badan daawashada. "
Emerson, oo ku dhawaaday taageerayaasha Instagram 200,000 oo si joogta ah u daabacay sawirada jacaylka noloshiisa oo u muuqda mid aad u jacel ah oo ku faani kara najaxa ninka.
Isadora ayaa mar uu faallo ka bixiyay sawirka Emerson: "Waa jaceyl aad u jilicsan, aad u macaan. Wuxuu had iyo jeer iigu hadlay waxyaabo qurux badan, wuxuu sameynayaa cajiib ah marnaba ma rumeyn karo inuu dhici karo, islamarkaana iila dhaqmo si fiican. Wuxuu ixtiraamaa aniga iyo qoyskeyga. Mar walba waan idin jeclaan doonaa, Emerson! "
Emerson Palmieri Hooyo Hore Dabiiciga ah Xogta Warka Xadida -Naftaada Shaqsiga
Emerson Palmieri wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsiyadiisa.
Xoogagga Emerson Palmieri: Isagu waa hal-abuurnimo, sharaf leh, deeqsinimo leh, diirran oo diirran.
Emerson Palmieri ' Wuxuu noqon karaa mid iskibriran, madax adag, kaligiis, caajis ah oo aan caqli lahayn.
Waa maxay waxa uu jecelyahay Emerson Palmieri: Marka hore, wuxuu jecel yahay xidhiidhkiisa Isadora. Emer sidoo kale wuxuu jecel yahay masraxiisa, isaga oo qaadanaya ciidaha, isagoo iibsanaya waxyaabo qaali ah Isadora, midabyo dhalaalaya oo xiiso leh saaxiibo.
Muxuu yahay Emerson Palmieri? In la iska indho tiro, xaqiiqda adag oo aan la daweyn sida boqor.
Inkastoo uu weli yahay da'yar, laakiin Emerson waa hogaamiye caadi ah. Xaqiiqadani lama oga dad badan. Waxa uu yahay riwaayad, hal-abuurnimo, is-kalsooni, madax adag oo aad u adag inuu iska caabiyo. Emerson wuxuu awood u leeyahay in uu gaaro wax kasta oo ay doonayaan in ay ku noolaadaan meel kasta oo noloshooda ah. Waxaa jira xoog gaar ah isaga "Boqorka Beeraha" xaaladda.
Emerson Palmieri Hooyo Hore Dabiiciga ah Xogta Warka Xadida -Neymar ayaa ka garab ciyaaray
Haa, sida hore loo sheegay, Emerson wuxuu ku dhashay Santos, Sau Paulo, wuxuuna ku biiray dhalinyarada Santos ee lagu aasaasay 2009. Ma ogtahay? ... Wuxuu ku qaatay lix sano kooxda isagoo ka garab ciyaari jiray Neymar intii lagu jiray waqtigiisii. Tan iyo markaas, Emerson waxa uu ka soo qaaday mid ama labo ka mid ah Cunugga Kale ee Brazil.
Emerson Palmieri Hooyo Hore Dabiiciga ah Xogta Warka Xadida -Nolosha Qoyska
Emerson wuxuu ka yimid qoyskooda heerka dhexe ee kubada cagta. Xaqiiqdii, maahan ciyaaryahan kaliya ee kubada cagta leh magaca Palmieri. Waxay u muuqataa in kubada cagta ay ka jirto qoyskiisa.
Emerson walaalkiis ka weyn Giovanni oo ka mid ah waalidiinta isla wakhtiga qorista, ayaa haatan u ciyaara Fluminense ee Brazil sida Number 6. Waxa uu sidoo kale u shaqeynayaa daafac bidix waxaana uu ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda reer Brazil ee 100.
Giovani sawirka kor ku xusan waa shan sano ka weyn kan walaalkiisa korsanaya.
Emerson Palmieri Hooyo Hore Dabiiciga ah Xogta Warka Xadida -Dabeecadiisa
Emmer waa ciyaaryahan aad u heer sareeya. Waxa uu ka ciyaari karaa booska bidix ama garabka bidix isagoo xitaa ka buuxsamay daafac midig intii uu joogay Roma.
Emerson wuxuu jecel yahay inuu horay u soo qaato daafaciisa. Wuxuu si fiican u yaqaanaa inuu qaato oo uu garaaco ninkiisa soo horjeeda. Tani waxay muujinaysaa xawaare aad u fiican, dheelitirka iyo xirfadaha Samba-ga sida geedi socodka.
Inkasta oo uu istaagay 5ft 9in, kama cabsanayo inuu jirkiisa u adeegsado faa'iidadiisa. Emerson ayaa awood u yeelanaya inuu sababo badan oo qalad ah ka ciyaaro kooxdiisa.
Dhamaadka kale ee berriga, Emer sidoo kale wuxuu ku fiican yahay xaaladaha hal-hal-qof iyada oo ay ugu wacan tahay inuu xoojin karo xaaladaha khaldan. Ka hor inta uusan Chelsea imaanin, waxa uu ka soo kabsaday daafaciisii ​​ugu fiicnaa Serie A.
Emerson Palmieri Hooyo Hore Dabiiciga ah Xogta Warka Xadida -Xirfadaha Caalamiga ah
Emerson wuxuu ka soo muuqday Brazil heerkiisa hoose ee 17 intii lagu jiray 2011 South American Under-17 Football Championship iyo intii lagu guda jiray 2011 FIFA U-17 World Cup, oo loo caleemo saaray horyaalkii hore. Waxa uu ahaa garsooraha oo aan laga adkaan intii lagu jiray labada ciyaarood, isagoo dhaliyay goolka kulankii Chile ee 16 March 2011.
Bishii Maarso 2017, ka dib markii uu ku dhowaa inuu helo jinsiyadda Talyaaniga, Emerson waxaa la soo wariyay inuu raacay macalinka xulka Italy Gian Piero Ventura isagoo doonaya inuu ku bedelo daacadnimadiisa caalamiga ah ee Italy. Waxa uu riyadiisa gala waxa uu ku yimid maalinta 29th ee March 2017.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Emerson Palmieri Hore ee Caruurta iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Leonardo Bonucci Xaashida Caruurnimada Sheeko Xaqiiqo Weyn
Ciro Immobile Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Warka Xogta Leh